I-Metro Trend Forex Ukuhweba Isu | Forex MT4 Izinkomba
Ikhaya Forex Strategies I-Metro Trend Forex Ukuhweba Isu
Abanye abantu bayathanda ukuzibeka engcupheni. Bayaphila ngokuthatha izingozi ezinkulu uma umvuzo uphakeme ngokwanele. Lolu hlobo lwabantu, uma bekhetha ukuba ngabahwebi, imvamisa iba luhlobo lwabathengisi abathanda ukuthatha ukuhweba okuyingozi ngethuba lokuthola imivuzo ephezulu. Nokho, akubona bonke abathengisi abanjalo. Kukhona labo abafuna ukunciphisa izingcuphe ngangokunokwenzeka. Kukhona abathengisi abangathanda ukuthatha ukuhweba okuphezulu okungenzeka noma ngabe kusho ukuthi bazothatha isivuno esincane uma kuqhathaniswa nabanye. Futhi lokho kulungile. Ayikho indlela elungile noma engalungile yokuhweba, abathengisi abanenzuzo noma abangenzi nzuzo kuphela.
IMetro Trend Forex Trading Strategy yenzelwe uhlobo lwesibili lomhwebi. Leli su elenzelwe labo abahle ngesivuno esiphansi kepha banokuvumelana okungcono. Lokhu kwenzelwa labo abangathanda ukuhweba ngamathuba aphezulu kunokuhweba okuthe xaxa. Yize leli qhinga liyisu eliphezulu kakhulu lokuhweba, isakhipha ukulinganiselwa okuhle kwengozi, okwenza kube ngcono nakakhulu kubadayisi abanjalo. Ivumela inzuzo engaguquguquki ngesilinganiso esiphakeme sokuwina kanye nenani elifanele lomngcipheko wengozi.
MACD Trend Amakhandlela
1 MACD Trend Amakhandlela
2 Isikhombi se-METRO
4.3 Indlela ukufaka Metro Trend Forex Ukuhweba Isu?
Ukuhlangana okumaphakathi kokuhlangana kanye nokwehlukana (MACD) inkomba ingenye yezinkomba zokuqina okuyisisekelo kubathengisi abaningi. Kuyithuluzi lokuhlola lobuchwepheshe eliqinisekisiwe elihlinzeka ngezimpawu zokuhweba ezisezingeni eliphakeme. Abathengisi bayayisebenzisa, abadayisi abangochwepheshe bayayisebenzisa, abahlaziyi bezobuchwepheshe namashadi bayayisebenzisa, ngisho nesikhungo (ibhange) abadayisi bayayisebenzisa.
I-MACD ngokwesiko iboniswa njengenkomba ekhangayo. Kuklanywe njengesibonisi esinganqunyelwe semingcele esizungeza umugqa ophakathi nendawo. Ukunyakaza kwayo kwesibuko sentengo yokuhamba kahle kahle, iya phezulu noma nini lapho ithola ukuthambekela kwe-bullish noma yehla uma kungenjalo.
I-MACD izungeza i-midline yayo, okukuziro. Noma nini lapho imigqa yayo noma imigoqo ye-histogram iphambuka kude ne-midline, Abadayisi bangacabanga ukuthi imakethe ithengwe ngokweqile noma idlulelwe ngaphezulu. Iziphambano ezingaphezulu kwe-midline nazo zikhombisa ushintsho ekuqondisweni kwethrendi.
Amakhandlela e-MACD Trend nokho asusa imigqa nemigoqo ejwayelekile evela efasiteleni. Kunalokho, ibeka kahle imigoqo eshadini lentengo. Ikhombisa ukuqondiswa kwemikhuba ngokushintsha imibala kuya ngokuthi i-MACD yendabuko ekhangayo kufanele iboniswe kanjani. Isebenzisa imibala emine ehlukene ukumela ukuma kwemigqa nemigoqo ye-MACD kanye nomkhondo wayo, ngabe i-MACD iyakhuphuka ngenkathi ingaphansi kwe-midline, ekhuphuka ngenkathi ingaphezulu kwe-midline, ukuwa ngenkathi ngaphezu komugqa ophakathi nendawo, noma ukuwa ngenkathi kungaphansi kwe-midline. Zonke lezi zimo zinemithelela ehlukile maqondana nokubuyiselwa emuva kwethrendi, Izimo zemakethe ezixakile nokuqondiswa kwethrendi.
Isibonisi se-METRO siyinkomba ekhangayo yangokwezifiso esiza abathengisi ukuthi babone umfutho nesiqondiso senkambiso. I-oscillator eboshiwe enezimpawu ku- 20 ukuze 80 uhla. Inani libhekwa njengeledlula lapho umugqa wesikhombisi se-METRO usondela kuye 20 futhi kuthengwe ngokweqile uma kudonswa kusondele 80.
Okuhlukile ngale nkomba ukuthi esikhundleni sokuba ne-midline esebenza njengomugqa we-trigger, idweba umugqa ohlukile ukuze usebenze njenge-trigger line. Lo mugqa udwetshwa ngokukhululeka ewindini lenkomba futhi wehla uye phansi kuye ngokuthi uthola kanjani ukuqondiswa kwesitayela. Lo mugqa uqobo umelela ukuthambekela kwesikhathi eside. Iphinde iveze eminye imigqa emibili emele ukuthambekela kwesikhashana. Le migqa ivame ukuhamba ngokushesha okukhulu uma iqhathaniswa nolayini wesikhathi eside, nokunyakaza kwentengo yesenzo sentengo eduze.
Lelisu lokuhweba lenzelwe ukuthatha ukuhweba kwekhwalithi ephezulu okuzuzayo ngamafuphi- ukuthambekela kwaphakathi nonyaka. Lezi zinkambiso zokuhamba ziye kolunye uhlangothi lwamakhandlela amaningana ngaphambi kokuba umkhuba ume. Leli qhinga lizuzisa ngalezo zinyathelo ezimfushane futhi liphuma ekuhwebeni ngokushesha lapho intengo ibuyela emuva.
Izimpawu zokungena kuleli su lisuselwa ekuhlanganeni kwesikhombisi se-METRO kanye namakhandlela e-MACD Trend. Imibala emele i-crossover ye-midline ye-MACD yizimpawu zethu eziyinhloko zokungena, ngenkathi ukuthungwa kwemigqa yenkomba ye-METRO kungaba isihlungi sesikhombisi-ndlela sethu.
MACD Trend Amakhandlela v3
Isikhathi se-RSI: 19
Izikhathi ezibekiwe: okungcono amahora ama-4 namashadi wansuku zonke
lwemali Pairs: ngababili abakhulu nabancane, nezinye izimpahla
Olayini bezinkomba ze-METRO kufanele babekwe ngale ndlela elandelayo:
Isibhakabhaka Esibhakabhaka: maphakathi
Umugqa wewolintshi wesibonisi se-METRO kufanele ngabe usanda kweqa ngenhla komugqa wesibhakabhaka-luhlaza obonisa ukuguqulwa kwesimo se-bullish
Amakhandlela we-MACD Trend kufanele ashintshe abe umcako okhombisa ukuthi imigqa ye-MACD nama-histograms ewele ngaphezu komugqa ophakathi omele ukuguqulwa kwesimo se-bullish
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho umugqa wewolintshi wesibonisi se-METRO weqa ngaphansi komugqa ohlaza okwesibhakabhaka
Vala ukuhweba ngokushesha lapho Amakhandlela e-MACD Trend eshintshela komunye umbala ngaphandle kukalamula
Umugqa wewolintshi wesibonisi se-METRO kufanele ngabe usanda kweqa ngaphansi komugqa wesibhakabhaka-luhlaza obonisa ukuguqulwa kwesimo se-bearish
Amakhandlela we-MACD Trend kufanele ashintshe abe obomvu okukhombisa ukuthi imigqa ye-MACD nama-histograms ewele ngaphansi kwe-midline emele ukuguqulwa kwesimo se-bearish
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho umugqa osawolintshi wesibonisi se-METRO weqa ngaphezu komugqa ohlaza okwesibhakabhaka
Vala ukuhweba ngokushesha lapho Amakhandlela we-MACD Trend eshintshela komunye umbala ngaphandle kokubomvu
Njengoba kushiwo ngaphambili, leli qhinga lokuhweba lincike kakhulu ekukhiqizeni amasethingi amakhulu okuhweba kunokuhweba okuthe xaxa. Lokhu kungenxa yokuthi isu lihlose ukuhweba ngokufishane okusha- ukuthambekela kwamaphakathi nonyaka futhi ukhetha ukuphuma kusenesikhathi lapho kukhonjiswa okuncane ukuguquka. Lokhu kunikeza isu isu lokuwina eliphakeme kakhulu uma kuqhathaniswa namanye amasu okuhweba. Nokho, kusho futhi ukuphuthelwa yizithelo eziphakeme noma kunini lapho umkhuba uqhubeka ngokuqhubekayo. Lokhu kujwayelekile phakathi kwamathrendi aqinile. Kungcono ukuphuma ekuhwebeni ngenzuzo kunokuhaha futhi ukhethe ukuthola inzuzo ephezulu kepha esikhundleni sokushiyelwa ukuhweba okuvulekile njengoba imakethe ibuyela emuva.
I-Metro Trend Forex Trading Strategy iyinhlanganisela yeMetatrader 4 (MT4) inkomba(s) futhi ithempulethi.
IMetro Trend Forex Trading Strategy inikeza ithuba lokuthola izici ezahlukahlukene namaphethini kumanani wamanani entengo angabonakali ngeso lenyama..
Indlela ukufaka Metro Trend Forex Ukuhweba Isu?
Landa iMetro Trend Forex Trading Strategy.zip
Iya kwesokudla ukukhetha iMetro Trend Forex Trading Strategy
Uzobona iMetro Trend Forex Trading Strategy iyatholakala kushadi lakho
Isiqephu esedluleVegas Moving Isilinganiso Forex Ukuhweba Isu
Isiqephu esilandelayoColor X Fisher Org v1 X20 MT5 Indicator